JustControl.it: Manangona ny angon-drakitra Attribution Across Channels | Martech Zone
Ny marketing nomerika dia entin'ny filàna fanaingoana bebe kokoa: loharanom-baovao vaovao, fitambaran'ny fiaraha-miasa vaovao, taham-panovana tsy miova, scenario UA be pitsiny, sns. Raha ny hoavin'ny indostria misy antsika, mampanantena izy fa ho sarotra kokoa ary granular.
Izany no antony ilana ireo matihanina mahomby sy maniry hahazo fahaiza-miasa azo tanterahina hiatrehana ireo toe-javatra sarotra sy sary sarotra. Na eo aza izany, mbola betsaka ny fitaovana efa misy manolotra fomba efa lasa iray "habe-mifanaraka-rehetra". Ao anatin'ity rafitra voalohany ity dia efa voalahatra hatrany am-piandohana ireo seho ara-barotra azo atao rehetra, ary tsy misy vintana handrakofana ny takian'ny tsirairay amin'ny ankapobeny. Mandritra izany fotoana izany dia ao anaty antsipiriany foana ny devoly.
Mifanaraka amin'izany, ny tsena ankehitriny dia mila boaty fitaovana fa tsy fitaovana, mba hahafahan'ny mpanjifa mamorona ny lalàny, ny angon-drakitra, ny metrika sns.
JustControl.it, vahaolana vaovao ho an'ny fanadihadiana angon-drakitra mandroso, dia fanandramana hamenoana ity banga ity. Amin'ity sombin-javatra ity dia misy topy fohy momba ity boaty fitaovana vaovao ho an'ny marketing nomerika ity. Mba hampisehoana ny fahafaha-manana feno an'ny JustControl.it, ity lahatsoratra ity dia manasongadina ohatra azo ampiharina momba ny fomba fahazoana, ny fizotrany ary ny fanovana ny angona.
JustControl.it Product Overview
JustControl.it dia napetraka tamin'ny fomba ofisialy ho toy ny vahaolana ahafahan'ny orinasa mampiasa fanaraha-maso feno amin'ny fandaniana doka, manombatombana ny zava-bitan'ny fampielezan-kevitra amin'ny fantsona maro samihafa mahavariana ary mamokatra tatitra namboarina ho azy. Araka izany, mampanantena motera ETL mahomby sy fahaiza-manao automatique ho an'ny fanaovana saritany data miorina amin'ny loharanom-baovao marobe ao amin'ny UI iray izy.
Amin'izao fotoana izao ny ekipan'ny JustControl.it dia milaza fa loharanom-baovao 30 eo ho eo no azo ampifandraisina eo noho eo ho an'ny mpanjifany.
Mandritra izany fotoana izany dia manantitrantitra ilay mpilalao vaovao fa afaka mampihetsika mora foana ny loharanom-pahalalana azo avy amin'ny fangatahana. Ny 'boribory' ankehitriny dia namboarina sy nofaritan'ny mpanjifany. Raha ilaina ny mampifandray vaovao dia hampifandraisina maimaim-poana izany. Toy izao ny fijerin'ny dia sy ny fizotran'ny mpanjifa mahazatra, araka ny JustControl.it.
Raha vantany vao natolotra ny seho demo, ny ekipan'ny JustControl.it dia mangataka amin'ny mpanjifa iray hameno fohy ny antsipiriany rehetra momba ny tranga data santionany ary hampifandray ireo loharano voarohirohy amin'ny kaonty JustControl.it.
Aorian'izany, ny seho santionany - miaraka amin'ny antsipiriany rehetra mifandraika amin'izany - dia natsangana sy namboarina.
Raha vantany vao nohaarahina ny scenario dia namboarina ny tatitra natao manokana. Ny valiny avy eo dia hamarinina amin'ny tarehimarika an'ny mpanjifa.
Farany, ampiharina ny ambiny amin'ireo scenario.
JustControl.it Navoaka vao tsy ela akory izay. Izany no antony tsy dia be loatra ny hevitry ny besinimaro navoaka hatreto. Mandritra izany fotoana izany dia efa misy sasany tsara misy ny feedback. Ireo orinasa dia mamaritra ny fahamendrehan'ny tatitra momba ny angon-drakitra, ny fahaiza-manao manokana momba ny fanodinana ary ny fanamorana, ary koa ny fanamorana.
Mahaliana ny mijery ny fomba mendrika an'i JustControl.it ireo fanamarihana tsara ireo.
JustControl.it Fahafahana fanodinana data
Araka ny ekipan'ny JustControl.it, ny vahaolana ataon'izy ireo dia tsy vitan'ny fitrandrahana angon-drakitra manta 'toy izao', fa koa amin'ny zavatra hafa.
Voalohany indrindra, ny boaty fitaovana dia mamoaka angon-drakitra. Ao amin'ny anaran'ny fampielezan-kevitra, ny tag ho an'ny firenena, mpitantana ary sehatra dia azo fantarina. Voalaza fa, miaraka amin'i JustControl.it, tsy misy ferana amin'ny karazana fampielezan-kevitra manokana. Ny refy fandrefesana sy sivana tsy voafetra ho azy ireo dia ampanantenaina, ary koa tsanganana tsy voafetra, samy KPI no refesina. Ny fitrandrahana metadata dia nanjary tena izy ihany koa.
Aorian'izany, ny angona dia sivanin'ny mpitantana, sehatra, mpitantana sns.
Amin'ny dingana fahatelo, ny fampahalalana mifandraika amin'ny tombony azo avy amin'ny mpanara-maso sy / na ny vahaolana anatiny BI dia azo ampiana sy atambatra.
Raha vantany vao nampiana angon-drakitra toy izany, azo ampiana info momba ny loharano sy ny 'tag' data hafa.
Ary farany, apetraka ny sivana araky ny firenena sy ny sehatra manerana ny loharano rehetra. Vokatr'izany dia noforonina ny sary tokana miorina amin'ny angon-drakitra samihafa. Midika izany fa ny tatitra ilaina amin'ny fanapaha-kevitra dia mety hiteraka.
Raha ny fijery sy ny fahatsapana ny vahaolana ankehitriny dia azo aseho ireto ohatra azo alaina manaraka ireto.
Drafitra ankapobeny miaraka amina ambaratonga azo inoana:
Drafitra ankapobeny miaraka amin'ny fisafidianana ny refy angon-drakitra mahazatra:
Drafitra ankapobeny miaraka amina santionan'ny sivana fanao ampiharina
JustControl.it dia manasongadina fa ny mety ho fanaingoana an'ireo fahaizana voalaza etsy ambony dia tsy voafetra. Amin'ity fizarana manaraka ity dia azonao atao ny mahita ny tetika ahafahana manome izany fahafaha-manao tsy manam-petra izany.
JustControl.it Fametrahana seho santionany
Ity tranga ity dia mifototra amin'ny hetsika nataon'ny maso ivoho mividy media izay mampiasa loharano 40 eo ho eo, anisan'izany ny AppsFlyer Tracker sy tambajotra. JustControl.it dia namorona tatitra roa manara-maso ny filan'ny mpanjifa.
Ny tatitra voalohany dia vokatry ny fikorianan'ny angon-drakitra momba ny angon-drakitra: angon-drakitra voaangona voaangona mifandraika amin'ny fandaniana doka amin'ny loharano azo ampiharina rehetra. Izy io dia manodina ny angon-drakitra rehetra amin'ny alàlan'ny fandinihana ny fananany (toy ny ekipa mifandraika hatramin'ny mpividy, fantsona sns.).
Ny tatitra faharoa dia mikendry ny hanome sary iray izay tsy hifandraika amin'ny angon-drakitra, fa amin'ny metatra voaisa - ireo izay hikajiana eo no ho eo ary miorina amin'ny endrika azo ovaina. Ny halehiben'ny metrika dia misy ireto refy manaraka ireto.
Mba hahafahana manatanteraka azy, ny ekipa JustControl.it dia namorona seho manokana naseho etsy ambany.
Marihina fa izy no JustControl.it ekipa mpanohana izany manorina mikoriana ireo fanodinana angona ireo. Na izany aza, mihevitra ny mpamatsy vahaolana fa, afaka kelikely, io fahafaha-manao io dia ho azon'ny mpanjifa ahafahany manangana azy irery.
Amin'izao fotoana izao dia misy fitsarana maimaimpoana iray volana. Ireo masoivoho nomerika sy mpamorona rindrambaiko dia afaka manafatra demo ary manandrana azy samirery ao JustControl.it. Arakaraka ny ananan'ny mpanjifa JustControl.it dia vao mainka hampiditra loharano hampiasaina eo noho eo izy ireo.
Ny fampidirana loharanom-baovao dia misy ankehitriny ny Google, Facebook Ads, TikTok, CSV, Excel, YouAppi, AD Colony, adcash, Adperio, ADSKEEPER, Adsterra Network, Affise, AppSamurai, APPLIFT, appnext, AppsFlyer, fanitsiana, BeaverAds, Chartboost, Clickadu, EngageYa, ExoClick, Fyber, IronSource, Liftoff, mgid, VK, Yandex Direct, MyTarget, PropellerAds, Remerge, Revcontent, RichPush, Snapchat, Tapjoy, UNGADS, firaisana ADS, Vungle, Mintegral, ary Zeropark.
Tags: Zanatany ADadcashzatraAdperioADSKEEPERTambajotra AdsterraAdsterra_networkAffiseApp SamuraiAPPLIFTappnexApps FlyerAppSamuraiappsflyerAttributionfamakafakana fanamarihanaBeaverAdsChartBoostClickadufiantsoana ny lakroaCSVEngageYaExcelexoclckexoClickFacebookfacebook adsfibreGoogleIron_SourceironSourcehitsong.itfisandratanamgidmintegralmyTargetPropellerAdsMamohaRevcontentRichPushsnapchattapjoyTikTokTwitterUNGADSfiraisana ADSfiraisanaADSvkVoluumVungleYandexYandex DirectYouAppiZeropark
Niditra tamin'ny tontolon'ny angona nomerika i Roman tamin'ny taona 2013. Nahavita nandray anjara taminà torolàlana maro izy: mpamorona eo aloha, lohalaharana eo alohany, fitarihana fampandrosoana, tompon'ny vokatra ary Lohan'ny vokatra. Raha izany dia nandray anjara tamin'ny famolavolana tracker click izy; CRM-fitaovana ho an'ny masoivoho; fitaovana handaminana sy hanombanana ny fizotry ny fividianana haino aman-jery; ary serivisy ho an'ny daholobe hampifandray ny mpividy sy ny mpanjifa ary hiantohana ny fifandraisana mahomby eo amin'izy ireo. Nanomboka tamin'ny taona 2019 dia niasa izy JustControl.it